ဂရပ်ဖစ်လုံခြုံရေးစနစ်များအကြောင်း | GSSC
GSSC သည်ခေတ်မီစာရွက်စာတမ်းများလုံခြုံရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောအတုပြုလုပ်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်. GSSC သည်သင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်လုံခြုံရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သောစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ရန်အထူးပြုသည်.
အဆင့်မြင့် optical decoding, အပြင်ကို on-the-spot စမတ်ဖုန်းကစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုလွယ်ကူသော, GSSC ၏အင်္ဂါရပ်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘီလီယံနှင့်ချီသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများတွင်အသုံးပြုသောအကြောင်းပြချက်အချို့ဖြစ်သည်. GSSC ကျော်များအတွက်လုံခြုံရေးပုံနှိပ်ခြင်းကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းအခွင့်အာဏာအစိုးရမှမူပိုင်ခွင့်ကိုလုံခြုံရေးနည်းပညာကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည် 40 နှစ်ပေါင်း.
အဲဖရက် V ကို. Alasia, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်သူနှင့်တီထွင်သူနှစ်လယ်ပိုင်း 70 ရဲ့အတွင်းအလျင်အမြန်စေလွှတ်Indicia®ဖြစ်စဉ်ကိုမူပိုင်ခွင့်နှင့်စာရွက်စာတမ်းလုံခြုံရေးနှင့်ထုတ်ကုန်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအတွက်ဤနည်းပညာ၏စီးပွားဖြစ်တီထွင်. ထိုကတည်းက, GSSC ရဲ့ကျယ်ပြန့်သုတေသနဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကလုံခြုံရေးပုံနှိပ်ခြင်းသည်လယ်ပြင်၌တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ရှည်စွာတည်ထောင်ခဲ့သည်အနေအထားကိုသာကိုခိုင်ခံ့စေပြီးသောအသစ်များစွာကိုထုတ်ကုန်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်အတွက်ရလဒ်ပါပြီ.
© 2021 မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်.
သတ်မှတ်ချက်များ | အရောင်းစည်းကမ်းချက်များ & အခွအေန | FCPA ပေါ်လစီ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | လော့ဂ်အင်